I-08 / 11 / 2019 | RayHaber
[06 / 12 / 2019] Sakarya Raylı Sistem Projesi İçin Somut Adımlar Atılacak	I-54 Sakarya
Usuku: 8 November 2019
Enye indlela eya Kumabhasi Omphakathi eKadikoy
Umasipala wase-Istanbul Metropolitan, Kadikoy Gen. Şahap Gürler Street uqale umsebenzi wezemigwaqo ngenxa yemizila eyengeziwe yamabhasi e-IETT enziwe. Ukuze uvimbele ama-Istanbulites ukuthi angathinteki kabi, kumiswa indawo entsha esiteshini i-Ayrılıkçesmesi. [Okuningi ...]
IKabataş Bağcılar Tram Times: Isigaba sokuqala somugqa we-19,3 Km sakhiwa phakathi kweSirkeci ne-Aksaray savulwa nge1992. Umugqa oxhumanisa izinkomba zeTopkapı neZeytinburnu, bese kuba yi-Eminönü [Okuningi ...]
Hypersensitive mayelana neBursa High Speed ​​Sitima; Indawo ... Grand National Assembly lokuhlangana Turkey Kit Commission. Umphathi Jikelele we-TCDD uKamuran Yazıcı usehholo nabasizi bakhe abaphathi abajwayelekile bomhlangano lapho kuzobonwa khona ama-akhawunti e-TCDD. Nayi i-toplantı [Okuningi ...]
ISamsun Metropolitan Municipality SAMULAŞ isingathe umhlangano weSamsun weKhomishini Yezokusebenza Kwezimoto we-Association of All Rail Systems Operators (TÜRSİD). Imininingwane nolwazi lwabiwe emhlanganweni obehanjelwe ngabamele omasipala abasebenza ngohlelo lwezitimela. mastiff [Okuningi ...]
• Kukhona ubude be-13.500 m, ubude bawo ngamunye uqukethe imigqa ephindwe kabili futhi uqukethe i-27000 m. • I-Strait ndima yenziwa ngomhubhe ocwilisiwe kanye nomugqa we-1 wokufakwa emhubheni ocwilisiwe [Okuningi ...]
I-TCDD ayizange imemezele imiphumela yokuhlolwa kwayo ngomlomo mayelana nokuqashwa kwabasebenzi izinyanga ezintathu ezigcwele. Ezindabeni mayelana nokwehluleka ukumemezela imiphumela yengxoxo yokuqashwa kweTCDD; Ukuhlolwa kwinqubo yokuqashwa kwe-TCDD [Okuningi ...]
Amanani entengo e-2019 Amanani aphezulu weTouch Speed ​​YTT kanye ne-Times: Izitimela ezihamba ngejubane eliphezulu ezenza izimpilo zethu zibe lula kwezokuhamba zokuxhumana ziyaqhubeka nokuxhuma amadolobha ahlukene, abagibeli namasiko. [Okuningi ...]
Amashejuli wesitimela i-Adana Mersin kanye namanani amathikithi 2019: I-Adana ngumgwaqo wesitimela osetshenziswa kakhulu phakathi kweMersin neMersin State Railways. Isilinganiso sokuhamba kwesikhathi i-45 ithatha imizuzu. Isikhathi sehlobo nobusika ngaphandle kokuqaphela [Okuningi ...]
IMarmaray, indawo yokuvala umgwaqo u-Iron Silk Road IChina Railway Express, esuka eXi'an, eChina, iya eYurophu isebenzisa iMarmaray, idlula iKazakhstan ne-Azzeran naseGeorgia, esemgqeni weBTK. [Okuningi ...]
Enye yamaphrojekthi abaluleke kakhulu we-Erzurum Metropolitan Municipality Peace Spring Viaduct, Iphini Likasihlalo we-AK Party uProf. Dr. UNuman Kurtulmuş'un ohambele umcimbi wavulwa ukuthi uzosebenza. Ixhuma i-Yıl Avenue ku-Şükrüpaşa futhi [Okuningi ...]